Madaxweyne Axmed Madoobe oo ka hadlay xiisada ka taagan Beledxaawo | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Axmed Madoobe oo ka hadlay xiisada ka taagan Beledxaawo
KISMAAYO – Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam(Axmed Madoobe) ayaa ka hadlay xiisada ka taagan degmada Beledxaawo gaar ahaana dhul boobka ay Kenya ka wado ee la xiriirta dhismaha Darbiga weyn ay ka dhiseyso.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sheegay in arrinta xiisada ay muddo dheer soo socotay isla markaana soo martay heerar kala duwan balse ay dhawaan kawada hadli doonaan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya.
…” Soomaaliya iyo Kenya xuduud aad u dheer ayay leeyihiin, laba Guddi ayaa loo diray xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, si ay u soo xaqiijiyaan waxa jira, hadana guddi kale ayaa la diray oo Dowladdan ka tirsan, waxaa hada la wada sugayaa in labada Madaxweyne ay isu tagaan, go’aan siyaasadeedna laga gaaro…”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Bulshada ku dhaqan degmada Beledxaawo ayaa ku eedeeyey maamulka Jubaland in ay la safteen ciidamada Kenya ee sameynayay dhul boobka iyo godadka ay ka qodeen gudaha Beledxaawo markii ciidankooda ay gudaha u soo galeen.
Dadka reer Beledxaawo ayaa sheegay in markii ay isku dayeen in ay ka hortagaan oo ay aasaan godokii ay qodeeb ay ciidamada kala eryeen.
Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay in aysan arrinta Beledxaawo wax ka qaban iyadoona Golaha Aqalka sare ay u yeereen afar kamid ah Wasiirada ay quseyso xaalada ka yaagan Beledxaawo.